8 Massachusetts ရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ ၂
8 Massachusetts ရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ
မေလ 20, 2022 Obioha ကိုနှစ်သက်သည်။
သင်သည် အလွန်စိတ်အားထက်သန်သူ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူဖြစ်ပြီး စားသောက်ဆိုင် သို့မဟုတ် အခြားအစားအစာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်လိုပါသလား။ Massachusetts ရှိ ဤအချက်အပြုတ်ကျောင်းများသည် အထွေထွေပညာရေးလေ့လာမှုများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်သောအစားအစာပြင်ဆင်မှုတို့ကို လက်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စားဖိုမှူးဖြစ်ဖို့ လမ်းကြောင်းဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပေမယ့် သင်ဟာ အစားအသောက်ကို အရမ်းစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြီးကြီးမားမား ဆုချနိုင်ပါတယ်။ အချက်အပြုတ်ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့အရာက ကျွမ်းကျင်မီးဖိုချောင်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းတွေကို စတင်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ နက်နက်နဲနဲ သင်ကြားပေးပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Massachusetts သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုကို တက်ရောက်ရန် စဉ်းစားနေပါက အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များသင့်တွင် အကောင်းဆုံးများကို ကြည့်ရှုထားပြီး၊ ကျောင်းများမှ ကမ်းလှမ်းသည့် ပရိုဂရမ်အမျိုးအစား(များ) နှင့် အခြားသူများအပေါ် လူအများက ၎င်းတို့အား အခြားသူများအပေါ် လေးစားရသည့် အကြောင်းရင်းများကို သိထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ မက်ဆာချူးဆက်ရှိ အကောင်းဆုံးနှင့် ထိပ်တန်းအချက်အလတ်စားကျောင်းများစာရင်းကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါသည်။
အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ ဒီလမ်းကြောင်းဟာ သင်အမှန်တကယ်လိုက်လျှောက်လိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်ဖို့ စေ့စေ့စပ်စပ် သုတေသနလုပ်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှုကို အလေးပေးတင်ပြလိုပါတယ်။ အချက်အပြုတ်သဘောတရား၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ ရေတိုနှင့် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များ အစရှိသည်တို့ကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်သောကြောင့် ကျောင်းများကို တိုက်ရိုက်စာရင်းသွင်းခြင်းသည် သင့်အတွက် ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါကို သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်း။အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ YouTube တွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိ အခြားလူများကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ချက်ပြုတ်နည်းများသာမက ၎င်းတို့စတင်ပုံ၊ တွေ့ကြုံရသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ၎င်းတို့ရှိရာသို့ ရောက်ရန် ဤကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြသည့်အကြောင်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဤအရာက သင့်အား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောကြောင့် (ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုတည်းသည် လူတိုင်းအတွက် အလုပ်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း) ၎င်းသည် သင့်အား အနှောက်အယှက်နည်းပါးသောခရီးကို ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်များ၏ထိပ်တွင် အောက်ပါစာအုပ်များရှိပါသည်။ - အရသာ သမ္မာကျမ်းစာ အမေရိကန်၏ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော စားဖိုမှူးများ၏ ဉာဏ်ပညာကို အခြေခံ၍ အချက်အပြုတ်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ မရှိမဖြစ် လမ်းညွှန်Andrew Dornenburg & Karen Page မှ၊ Paula Figoni ရေးသားသော မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊ Andrew Dornenburg & Karen Page မှ အချက်အပြုတ်အနုပညာလက်ရာ၊ နှင့် စားဖိုမှူးတစ်ဦး၏ ဝိညာဉ်- ပြီးပြည့်စုံခြင်းဆီသို့ ခရီးMichael Ruhlman မှ
အချို့ကို အမည်ပေးရန်အတွက် Mashed၊ Cuisinart Canada၊ Ryan Dean Dexton နှင့် Masterchef Australia ကဲ့သို့သော YouTube ချန်နယ်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Massachusetts က မင်းအတွက် မဖြတ်ဘူးဆိုရင်၊ တခြားပြည်နယ်တွေလိုမျိုးမှာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အချက်အပြုတ်ကျောင်းတချို့ကို ကြည့်ပါ။ Rhode Island, New Jersey နှင့် Pennsylvania . အကယ်၍ သင်သည် US ပြင်ပတွင် ပညာသင်ကြားလိုပါက ဤဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကနေဒါရှိ အချက်အပြုတ်အနုပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကျောင်းများ.
Massachusetts ရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ၏ ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်
1 ။ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်
2. Cambridge School of Culinary Arts
8. Middlesex အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်
Massachusetts ရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ - FAQs
Massachusetts တွင် မတူညီသော အချက်အပြုတ်ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းရှိပြီး အများစုမှာ ဘော်စတွန်အနီး သို့မဟုတ် အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ Massachusetts ရှိ ပျမ်းမျှကျူရှင်စရိတ်မှာ $11 ဖြစ်သော်လည်း အချို့သော Community Colleges များတွင် ကျူရှင်မှာ $12,282 လောက်သာကုန်ကျနိုင်သည်။
Massachusetts တွင် အချက်အပြုတ်နှင့် ဧည့်ဝတ်ပြုရေးကျောင်းများ အချိုးကျ များပြားသည်။ ရပ်ရွာကောလိပ်များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် အလယ်တန်းလွန်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများမှ ပေးဆောင်သည့် ပရိုဂရမ် စုစုပေါင်း ၁၆ ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် အချက်အပြုတ်အနုပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများအတွက် ပြည်နယ်တွင်းရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အရည်အသွေးပြည့်မီသော သင်တန်းကို ရှာဖွေနိုင်စေရန် အခွင့်အလမ်းများစွာကို ပေးပါသည်။
Massachusetts ရှိ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဟင်းချက်ကျောင်းသို့ သွားလိုပါက အောက်ပါအချက်အပြုတ်ကျောင်းအချို့ကို ကြည့်ပါ။ ပြည်နယ်ရှိ အကောင်းဆုံးကျောင်းအချို့ကို သင့်ထံသို့ ယူဆောင်လာစေရန် ရရှိနိုင်သော အစီအစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေထားပါသည်။
ဤစာရင်းရှိ ပရိုဂရမ်များအားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုထားကြောင်း သတိပြုပါ။
Boston ရှိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Boston University သည် Massachusetts ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများစာရင်းတွင် ၎င်း၏ပရိုဂရမ်သည် College Factual တွင် နံပါတ် 1 အဆင့်ရှိသောကြောင့် ၎င်း၏ပရိုဂရမ်တွင် ပထမဆုံး ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အချက်အပြုတ်အနုပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကျောင်းများစာရင်း.
အတွေ့အကြုံရင့် စားဖိုမှူးများနှင့် အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ လုံးလုံးလျားလျား သင်ကြားပို့ချပေးသော Boston University ၏ အချိန်ပြည့် အချက်အပြုတ်အနုပညာ ပရိုဂရမ်သည် တစ်ကိုယ်ရေနှင့် ရင်းနှီးသော သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတွင်းရှိ တစ်ခုတည်းသော တစ်ခုတည်းသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ဤပရိုဂရမ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသောအခါ၊ ကျောင်းသား၊ Boston University မှ အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ အောင်လက်မှတ် ပရိုဂရမ်ကိုလက်ခံပြီးနောက် Boston University ၏ Master of Liberal Arts in Gastronomy အတွက် credit လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Program ကို Duration:: အဆိုပါ အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ လက်မှတ်အစီအစဉ် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဆယ့်လေးပတ်ပြင်သစ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ချက်ပြုတ်နည်းများကို ကျောင်းသားများအား ဖော်ထုတ်ပြသသည့် လက်ဆင့်ကမ်း ချက်ပြုတ်ခြင်း အစီအစဉ်။ ၎င်းသည် ဆောင်းဦးနှင့် နွေဦးရာသီများတွင် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်လည်ပတ်သည်။ အတန်းများသည် တနင်္လာနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့အထိ ရက်ပြည့်တွေ့ဆုံသည်—ရံဖန်ရံခါ ညနေပိုင်းနှင့် စနေ၊
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်: $ 14,200
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် (ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကဲ့သို့) အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ကျောင်းဆိုက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Massachusetts ရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးမှာ Cambridge တွင်ရှိသော Cambridge အချက်အပြုတ်အနုပညာကျောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Greater Boston ဧရိယာနှင့် ပြင်ပရှိ တက်သစ်စပညာရှင်များနှင့် စိတ်အားထက်သန်သော ဝါသနာရှင်များအတွက် အချက်အပြုတ်ပညာကို သင်ကြားပေးပြီး ချက်ပြုတ်ခြင်း၏ အနုပညာနှင့် သိပ္ပံပညာကို မိတ်ဆက်ပေးကာ အရသာရှိသော ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် မုန့်ဖုတ်ခြင်းတွင် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဘော်စတွန်၏ လူစည်ကားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင် တည်ရှိပြီး CSCA သည် ကျောင်းသားများအား မြို့တော်တွင် ကျင်းပသည့် ပွဲများတွင် ပါဝင်နေစဉ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အချက်အပြုတ် လမ်းကြောင်းများကို စူးစမ်းလေ့လာရန် အခွင့်အရေး ပေးပါသည်။
Cambridge School of Culinary Arts ကို International Association of Culinary Professionals မှ ထောက်ခံထားပြီး American Institute of Wine and Food ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ပြန်မအမ်းနိုင်သောလျှောက်လွှာကြေး $ 45.00
အချက်အပြုတ်အနုပညာတွင် သင်၏ နောက်ခံ၊ လေ့ကျင့်မှု သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု (လိုအပ်ပါက) စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ပန်းတိုင်များနှင့် လျှောက်ထားရသည့် အကြောင်းရင်းများ
သင်၏ လတ်တလော ပညာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံစာများ၏ တရားဝင်မိတ္တူများ- အထက်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ညီမျှသော (GED၊ HiSet သို့မဟုတ် TASC) သို့မဟုတ် ကောလိပ်
အလုပ်ရှင်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံမှ ကိုးကားစာနှစ်စောင်
Program ကို Duration:: အချက်အပြုတ် လက်မှတ် အစီအစဉ် (CCP) သည် 16 ပတ် ကြာမြင့်ပါသည်။ အချက်အပြုတ် လက်မှတ် အစီအစဉ်ကို ကျေနပ်စွာ ပြီးမြောက်ပါက ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ အချက်အပြုတ် အသိပညာ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို ထပ်မံ ပြုပြင်ရန် 37 ပတ် ပြင်းထန်သော Professional Chef's Program သို့ တိုက်ရိုက် လွှဲပြောင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိသည်။
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်: $ 14,655.00
Danvers ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်တည်ရှိပြီး North Shore Community College သည် Niche တွင်ကြယ်လေးပွင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဖြင့် Massachusetts ရှိအကောင်းဆုံးအချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
NSCC သည် အချက်အပြုတ်အနုပညာနှင့် အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တွဲဖက်သိပ္ပံဘွဲ့၊ အချက်အပြုတ်အနုပညာနှင့် အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ခရက်ဒစ်လက်မှတ်၊ နှင့် အခြေခံအချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ ပြီးဆုံးလက်မှတ်ကဲ့သို့သော အချက်အပြုတ်အစီအစဉ်သုံးခုကို ပေးပါသည်။
Program ကို Duration:: ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်ပါမည်။ သို့သော်လည်း အမြင့်ဆုံးအဆင့် ထွက်ပေါက်အမှတ်ကို ပြီးမြောက်ရန်အတွက် မျှော်လင့်ထားသည့် ပရိုဂရမ်အရှည်မှာ2နှစ်ဖြစ်သည်။
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်ကျူရှင်နှင့်အခကြေးငွေများကို မှတ်ပုံတင်ထားသော ခရက်ဒစ်နှင့် နေထိုင်ခွင့်အရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး ခရက်ဒစ်တစ်ခုလျှင် $200 မှစတင်ကာ semester တစ်ခုစီတွင် ကျသင့်ငွေများကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ အချက်အပြုတ်အစီအစဉ်များအတွက် အပိုပရိုဂရမ်ကြေးများကို ကောက်ခံပါသည်။
ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။
Holyoke Community College သည် Massachusetts ရှိ ထိပ်တန်းအချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တစ်ခုတည်းသော အမေရိကန်အချက်အပြုတ်အဖွဲ့ချုပ်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ပရိုဂရမ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဤလက်မှတ်သည် အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ AAS အတွက် သင်၏ပထမနှစ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ အသုံးချသိပ္ပံဘွဲ့၊ အချက်အပြုတ်အနုပညာလက်မှတ်၊ နှင့် ဧည့်ဝတ်ပြုမှုစီမံခန့်ခွဲမှုလက်မှတ်အပါအဝင် မတူညီသော ပရိုဂရမ်များစွာကို ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဤတွင်၊ သင်သည် သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက် ရည်စူးထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှ တိုက်ရိုက်သင်ယူမည်ဖြစ်သည်။ စားဖိုမှူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ နာမည်ရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ကို စတင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားလာရေးနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခု ထူထောင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ HCC က သင့်အား လေးနှစ်သင်တန်းကျောင်းသို့ လွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် ဘွဲ့ရရန် ကူညီပေးပါမည်။
ပရိုဂရမ်တစ်ခုစီ၏ကြာချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လိုအပ်ချက်များအကြောင်း အချက်အလက်များကို တောင်းဆိုရန် အောက်ပါကျောင်းဆိုက်ကို သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Bristol အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်သည် Attleboro ရှိ ကျော်ကြားသောကောလိပ်ဖြစ်ပြီး Massachusetts ရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အချက်အပြုတ်အနုပညာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းပရိုဂရမ်သည် သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကို အားဖြည့်ပေးပြီး ဝင်ခွင့်အဆင့်နှင့် အဆင့်မြင့်ရာထူးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ကျောင်းသားများကို ပြင်ဆင်ပေးသည့် သင်တန်းမျိုးစုံကို ပေးပါသည်။
BCC ၏ အချက်အပြုတ်အစီအစဉ်တွင် ဘွဲ့လမ်းကြောင်း (AAS in Culinary Arts သည် တာရှည်ခံသည်။ နှစ်နှစ်တာကာလ) နှင့် လက်မှတ်လမ်းကြောင်း (Certificate of Achievement in Culinary Arts Programme တွင် အလုပ်လုပ်သည်။ လအနည်းငယ်).
Bristol Culinary Arts Career Program တွင် ဖော်ပြထားသော သင်တန်းအချို့ ပါဝင်သည်-
အချက်အပြုတ် မရှိမဖြစ် နှင့် အဆင့်မြင့် အချက်အပြုတ်
ပေါင်းစပ်ပညာနှင့် ဘားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အခြားအရာများ
အစီအစဉ်ကုန်ကျစရိတ်: အစီအစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်း ရှာဖွေပါ။ ဒီမှာ.
6. Berkshire ကွန်မြူနတီကောလိပ်
Pittsfield တွင်တည်ရှိပြီး Berkshire Community College သည် Massachusett ရှိ ထိပ်တန်းကျောင်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းကို အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်။
အချက်အပြုတ်အနုပညာစီမံခန့်ခွဲမှု လက်မှတ်အစီအစဉ်သည် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် တာဝန်ရှိသော ရာထူးများအတွက် ကျောင်းသားများကို ပြင်ဆင်ပေးသည်။ အစားအစာပြင်ဆင်မှု၊ ပန်းကန်ပြားမိတ်ဆက်ပွဲ၊ ဘူဖေးနှင့်ပွဲစားနည်းပညာများကို အုပ်စုငယ်နှင့်အကြီးများအတွက် သင်ယူကြသည်။ သန့်ရှင်းရေး၊ အာဟာရ၊ မုန့်ဖုတ်ခြင်းဆိုင်ရာမူများ၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မီးဖိုချောင်ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ်မှုများကို လေ့လာသည်။ ကျောင်းသားများသည် ကြီးကြပ်ထားသော အလုပ်သင်/အလုပ်အတွေ့အကြုံဖြင့် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းများကို အသုံးချပါသည်။
Program ကို Duration:: ဤသည်မှာ တစ်နှစ်၊ 28-ခရက်ဒစ် လက်မှတ်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်- ခရက်ဒစ်တစ်ခုလျှင် $223 မှစတင်သည်။
Massachusetts ၏အကောင်းဆုံးအချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Bunker Hill Community College သည် အချက်အပြုတ်အနုပညာပရိုဂရမ်နှစ်ခု- ဒီဂရီပရိုဂရမ်နှင့် လက်မှတ်ပရိုဂရမ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
လက်မှတ်အစီအစဉ်သည် အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ခွင့်အဆင့်ရာထူးများအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအရည်အချင်းများနှင့် ကျောင်းသားများအား အသိပညာပေးသည့် ပိတ်ရက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Program ကို Duration:− ဤသည်မှာ စက်တင်ဘာလမှ မေလအထိ စီစဉ်ထားသော 22-semester ခရက်ဒစ်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
အချက်အပြုတ်အနုပညာဒီဂရီရွေးချယ်ခွင့်သည် အချက်အပြုတ်အနုပညာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှတောင်းဆိုသောအချက်အလတ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော လက်တွေ့အသုံးချမှုဖြင့် ကျောင်းသားများကို ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ပရိုဂရမ်သည် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနေရာအများစုတွင် တွေ့ရှိရသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းဝင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၏ လည်ပတ်မှုနှင့် အလုပ်သင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုတွင် ပါဝင်ကြပြီး အဆုံးတွင်၊ နှစ်နှစ် ပရိုဂရမ်တွင် ကျောင်းသားများကို အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ တွဲဖက်အသုံးချသိပ္ပံဘွဲ့ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် American Culinary Federation စံနှုန်းများကို အခြေခံပြီး၊
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်သင်တန်းခရက်ဒစ်တစ်ခုလျှင် $220 မှစတင်ပါသည်။
Middlesex Community College သည် Massachusetts ရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဧည့်ဝတ်ပြုမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အချက်အပြုတ်အနုပညာနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ထူးခြားသောအချက်အပြုတ်အစီအစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
MCC ရှိ အချက်အပြုတ်အနုပညာသင်တန်းများကို Lowell၊ Bedford နှင့် အွန်လိုင်းတွင်လည်း ကျင်းပသည်။ ဤပရိုဂရမ်များအတွင်း ကျောင်းသားများသည် အချက်အပြုတ်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးကို ထိတွေ့ခွင့်ရပြီး ပကတိစတင်သူဖြစ်သူများ သို့မဟုတ် အပိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းများရယူရန် ရှာဖွေနေသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွေ့ကြုံရမည့်အရာများနှင့် ဆင်တူသောအဖွဲ့များတွင် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် သင်ယူကြသည်။
အချက်အပြုတ်လုပ်ငန်းသည် မြန်ဆန်သွက်လက်ကြောင်း Middlesex မှအသိအမှတ်ပြုပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုပေးပို့ရန် လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဖိအားမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျောင်းသားများအား သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်။
Program ကို Duration:: အချက်အပြုတ်အနုပညာဆိုင်ရာ AAS ဘွဲ့အတွက် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်။
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်: ခရက်ဒစ်ယူနစ်တစ်ခုလျှင် $252 မှစတင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အချက်အပြုတ်ကျွမ်းကျင်မှုသည် နေ့ချင်းညချင်း မရရှိပါ။ ဤအရည်အချင်းများသည် အလုပ်ကြိုးစားမှု၊ ကတိကဝတ်များ၊ စည်းကမ်းရှိမှု၊ နှင့် ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒင်္ဂါးပြားများစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် အရေးကြီးသောကြောင့် သင်၏သီအိုရီဆိုင်ရာသင်ယူမှုများကို သင်၏လက်တွေ့အတန်းများနှင့် ချိန်ညှိရန်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေပါ။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ နာမည်ခံထားတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်က လူတွေကို ဒါမှမဟုတ် အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေ ပြောပြမယ့်သူတွေကို ရှာဖွေပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ မင်းရဲ့အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ပါ။
Massachusetts မှာ စားဖိုမှူးတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။
Massachusetts တွင် စားဖိုမှူးဖြစ်လာရန် သီးခြားတရားဝင်ပညာရေး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လိုင်စင် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် မက်ဆာချူးဆက်ရှိ ဤစားသောက်ဆိုင်များသည် အရည်အချင်းများကို ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းထားသည့် မက်လုံးများကိုကြည့်ကာ ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် အချက်အပြုတ်အနုပညာပရိုဂရမ်ကို အမှန်တကယ်တက်ရောက်ရန် စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
အချက်အပြုတ်ကျောင်းတက်ဖို့ အသက် 30 ရှိပြီလား။
ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ အချက်အပြုတ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းစတင်ရန် သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့် သင်သည် အသက် 30 ကျော်သည့်တိုင် စားဖိုမှူးတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အခွင့်အလမ်းများသည် လူငယ်စားဖိုမှူးများကို ပို၍နှစ်သက်ဖွယ်ရှိသည်။
Louisiana ရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ| အခကြေးငွေနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
Houston | ရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ အခကြေးငွေများနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
Rhode Island ရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
အော်ရီဂွန်ရှိ ထိပ်တန်းအချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
Texas ရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေများနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
Arizona တွင် အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
မေရီလန်းရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ
Tennessee ရှိ အချက်အပြုတ်ကျောင်းများ | အခကြေးငွေနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ
Website | ကျွန်ုပ်၏ အခြားဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။
အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက် UK ရှိ7MBA
Minnesota ရှိ အသိအမှတ်ပြုအွန်လိုင်းကောလိပ် 10 ခု
Illinois ရှိ အသိအမှတ်ပြု အွန်လိုင်းကောလိပ် ၈ ခု
Maryland ရှိ အသိအမှတ်ပြု အွန်လိုင်းကောလိပ် ၈ ခု
Previous post:စျေးအသက်သာဆုံး Self Paced အွန်လိုင်းကောလိပ် 10
Next Post:အီတလီရှိ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်း ၁၀ ကျောင်း